Thwebula Ustream 2.7.8 – Vessoft
Ustream – isofthiwe usakaze ividiyo ngesikhathi sangempela. Ustream kwenza ukugunyaza futhi ukusakaza siqu isiqophi inethiwekhi yakho. Isofthiwe ikuvumela ukuba ushiye imibono ukudala okhethweni. In Ustream yonke imicimbi ukusakaza zihlukaniswe ngezigaba, eyenza ukuba ngokushesha ukuthola ividiyo oyifunayo. Isofthiwe isici, evumela ukuthi wena ukwabelana ukusakaza ngokusebenzisa izicelo ahlukahlukene. Ustream ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Buka futhi ukusakaza of ukusakaza isiqophi
Amandla ukushiya comments
Search elula videos oyifunayo
Amazwana on Ustream:
Ustream Ahlobene software: